ကျစ်လစ်သော rotary လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > ကျစ်လစ်သော rotary လျှပ်စစ် actuator
ကျစ်လစ်သော rotary လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး ကျစ်လစ်သော rotary လျှပ်စစ် actuaသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ အထူးသဖြင့် သေးငယ်သော အလုံး & ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် damper auသို့mation.AOX ရဲ့ အသစ်တီထွင်ပြုလုပ်သော ကုန်ပစ္စည်း ပုံစံ အယူအဆ နှင့် ကုန်ပစ္စည်းs တွင် လက်တွေ့ကျတဲ့ လျှောက်လွှာများ ရှိ လက်ခံရရှိ အလွန် အာရုံစူးစိုက်မှု နှင့် အသိအမှတ်ပြုမှု။ AOX-R ကို ကို စီးရီး ကျစ်လစ်သော rotary လျှပ်စစ် actuaသို့r များမှာ စိတ်ချရသော, လုံခွုံသော နှင့် အဆင်ပြေ, နှင့် အဆိုပါ အားသာချက်များ ၏ compatibility နှင့် practicability.We wဖြစ်h သို့ ဖြစ် သင့်ရဲ့ ရှည်လျားသော သက်တမ်း မိတ်ဖက် တွင် Chတွင်a.
1. ခိုင်မြဲသောချေးယဉ်အိမ်ယာ: AOX-R ၏ shell ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်း rotary လျှပ်စစ် actuator anodic ဓာတ်တိုးကုသမှုနှင့် polyester အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ, လူမီနီယံအလွိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခိုင်မာတဲ့ချေး-ခံနိုင်ရည်နှင့်ဝင်း IP67, NEMA4နဲ့6ဖြစ်ပါသည်, IP68 optional ကိုဖြစ်ပါတယ် ..
2. အရောင်ရွေးချယ်မှုများ၏မတူကွဲပြား: နျ Standard အရောင်ကမီးခိုးရောင်နဲ့ bule ဖြစ်ပါတယ်။
3. တိုက်နယ်: ထိန်းချုပ်ခြင်း circuit ကို Single-အဆင့်သို့မဟုတ်သုံးခု-အဆင့် power supply စံနှင့်တွေ့ဆုံ circuit ကို layout ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်းနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖြစ်ပါတယ်, ဆိပ်ကမ်းကိုထိရောက်စွာအပိုဆောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့လိုအပ်ချက်များကိုအမျိုးမျိုးဖြည့်ဆည်း။
4. ဂီယာအမျိုးအစား: AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်း rotary လျှပ်စစ် actuator ၏ပြည်တွင်းရေးဒီဇိုင်းတီကောင်ဂီယာနဲ့တီကောင်ဒီဇိုင်းနိယာမချမှတ်။ အတိအကျတီကောင်ဂီယာယန္တရားအဆိုပါ actuator ကောင်းသောစွမ်းဆောင်မှု, တည်ငြိမ်ဂီယာနိမ့်ဆူညံသံများနှင့်ကြာမြင့်စွာဝန်ဆောင်မှုအသက်ကိုစေသည်သောထိထိရောက်ရောက်မြင့်သောလိမ်အားထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်သည်။ Self-သော့ခတ် function ကိုနှင့်အတူကပြောင်းပြန်လည်ပတ်တားဆီးနိုင်ပြီး, ၎င်းဂီယာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, ဆီထည့်ရန်မလိုအပ်တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါတယ်။
ထိန်းချုပ်မှုလိုင်း Single-အဆင့်သို့မဟုတ်သုံးခု-အဆင့် power supply စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူလိုက်နာလျက်, AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်း rotary လျှပ်စစ် actuator လိုင်း layout ကိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတက္ကသိုလ်များနှင့်သုတေသနဌာန၏သိပ္ပံနည်းကျနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအပေါ်မှီခို, Wenzhou တက္ကသိုလ်နှင့် Wenzhou အသက်မွေးမှုကောလိပ်နှင့်အတူကောင်းသောစီမံကိန်းကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်ခဲ့သည်။ Zhejiang Aoxiang ကုမ္ပဏီ၏စက်မှုဇုန်စကေးအခန်းကဏ္ဍမှအပြည့်အဝဆော့ကစားပေးပါနဲ့ high-tech AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်း rotary လျှပ်စစ် actuator ဖွံ့ဖြိုး။
တစ်ချိန်တည်းမှာကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းထိန်းချုပ်များ၏အသေးစိတ်ကို, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးဖို့အာရုံစိုက်, ချောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာ AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်း rotary လျှပ်စစ် actuator ၏အသွင်အပြင်ကိုသေချာနှင့်ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံကိုပေးနိုင်ပါသည်။
A: ပုံမှန် AOX-R ကိုစီးရီးကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိကျစ်လစ်သိပ်သည်း rotary လျှပ်စစ် actuator ။
မေး: AOX အဘယ်အရာကိုပူဇော်ရသနည်း
ဖြေကျနော်တို့ကိုကမ်းလှမ်း: လျှပ်စစ် actuator (AOX-R, AOX-မေး, AOX-L, AOX-QL, AOX-M) ။
Pneumatic actuator (AOX-P) ။ (APL-210N, မေး-510N) switch ကို box ကိုကန့်သတ်။
Q: 100 ခန့်ကိုအပိုင်းပိုင်း AOX-R ကိုစီးရီးကျစ်လစ်သိပ်သည်း rotary လျှပ်စစ် actuator ကိုဝယ်စေချင်ပေမယ့်ကျွန်မတဦးတည်းကြိုးစားကြည့်ချင် firist ။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏တောင်းဆိုမှုကို၏ဘယ်လိုထင်သလဲ
hot Tags:: ကျစ်လစ်သော rotary လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်